Uyinyamekela njani intliziyo yakho ngexesha lokukhulelwa | Ukhathalelo - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Imidlalo Imidlalo Enzima Imfundo Yezempilo Ekuhlaleni Inkampani Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Inkampani, Ukuphuma Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Impilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, Iindaba Iindaba Cinezela
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Ungayinyamekela njani intliziyo yakho ngexesha lokukhulelwa?
Ungayinyamekela njani intliziyo yakho ngexesha lokukhulelwa?
Imfundo yezeMpilo Imiba yooMama
Utshintsho olwenzeka ngexesha lokukhulelwa luhlala lukhwankqisa kwaye lusoyikisa oomama abakhulelweyo. Isibeleko esikhulayo sichaphazela onke amalungu — kubandakanya nentliziyo yakho. Amava athile utshintsho olukhulu ngexa lokukhulelwa, ukusuka ukwanda ngama-50% kumthamo wegazi lomzimba ukuya kwi ukwanda kwenqanaba lokukhulelwa kwentliziyo .Intliziyo yakho sisitshixo kwimpilo efanelekileyo ngexesha lokukhulelwa nakwamanye amaxesha obomi, nawo. Nantsi indlela yokuyinyamekela.
Isifo sentliziyo: Esona sizathu siphambili sokufa koomama
Unobangela okhokelela ekufeni kwabasetyhini abakhulelweyo nakwabasetyhini kwithuba lasemva kokubeleka sisifo sentliziyo, utshoUJanna Mudd, MD, i-OB-GYN oziqhelanisa nayo Hoffman kunye nabaNxulumene eBaltimore, eMaryland. Isifo sentliziyo sinegalelo kwi-26.5% yokufa koomama, ngokuka Ikholeji yaseMelika yoNyango kunye neeGynecologists . Ngelixa iimeko zentliziyo esele zikhona zingumngcipheko, eyona nto ixhalabisayo yimeko yentliziyo efunyenweyo ethi ngamanye amaxesha ikhule ithi cwaka.
Intliziyo esempilweni ngaphambi kokukhulelwa
Isitshixo kwimpilo yentliziyo ngexesha lokukhulelwa kukuqinisekisa ukuba nentliziyo esempilweni ngaphambi kokuba ukhulelwe, ucacisa uGqirha Mudd. Le ngcebiso iyahambelana tyena Umbutho wentliziyo yaseMelika , ecebisa ukuba abasetyhini kufuneka bandise impilo yentliziyo yabo ngaphambi kokukhulelwa.
UMark P. Trolice, MD, umlawuli e UKUNAKEKELWA kokuzala: IZiko le-IVF , ucebisa ukuzivocavoca kunye nomsebenzi we-aerobic ngaphambi kokukhulelwa kwaye ngexesha lokuqinisekisa intliziyo esempilweni.Ukuzivocavoca rhoqo kuphucula okanye kugcina ukomelela komzimba, kuyanceda kulawulo lobunzima, kunciphisa umngcipheko wesifo seswekile sokukhulelwa kubafazi abatyebe kakhulu, iingxaki zoxinzelelo lwegazi, kunye namacandelo e-C-kwaye kuphucula impilo yengqondo, utshilo.
Ngexesha lokukhulelwa, izinga lokuphumla kwentliziyo yakho linokunyuka ukuya kwi-20 beats ngomzuzu. Ngapha koko, kuhlala kube kanye kwiimpawu zokuqala zokukhulelwa.
Intliziyo esempilweni kufuneka ibe yinto ephambili kwimpilo yomama nomntwana ngexesha lokukhulelwa, nasemva kokuba umntwana ezelwe, naye.
Ukukhulelwa kunye neemeko zentliziyo esele zikho
Kuthekani ukuba sele unayo imeko yentliziyo esele ikho ngaphambi kokukhulelwa?
Kukho iimeko ezithile zentliziyo, ezinje nge-cardiomyopathy, apho ukukhulelwa kungacetyiswa ngenxa yomngcipheko wokugula kunye nokusweleka kunina, uGqirha Mudd ucacisa. Ezinye iimeko ezinje ngoxinzelelo oluphezulu lwegazi kunye neswekile, ezinomngcipheko ophezulu wesifo sentliziyo, kufuneka zilungiselelwe ngaphambi kokukhulelwa. Ucebisa ngelithi abasetyhini abaneemeko zentliziyo esele bekho bayabonisana neengcali zokubelekisa kunye nogqirha wentliziyo ngaphambi kokukhulelwa. Uya kufuna iimvavanyo ezibalulekileyo zokubeka esweni intliziyo ngaphambi nangexesha lokukhulelwa.
Ugqirha Trolice uthi ukuba owasetyhini unesifo sentliziyo okanye semiphunga, uxinzelelo lwegazi olunamandla, okanye ipreeclampsia, ngoko ke imithambo ayikhuthazwa. Ngapha koko, abasetyhini abanesingqisho sentliziyo esingaqhelekanga (arrhythmia), izifo ezingalawulwanga kakuhle ezinjengeswekile okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu, okanye abaphantsi kakhulu okanye abatyebe kakhulu kufuneka baxoxe ngemingcipheko nogqirha ngaphambi kokuba bakhulelwe, uyachaza. Kubalulekile ukuba amanqanaba e-thyroid ahlolwe kwaye aphuculwe njengoko kufuneka.
Ukubetha kwentliziyo ngexesha lokukhulelwa: Isikhalazo esiqhelekileyo
Ukubetha kwentliziyo akubangelwa kukukhathazeka. Ugqirha Mudd uthi zixhaphakile ngexesha lokukhulelwa: Ukubetheka yinto engathandekiyo yokubetha okunyanzelekileyo, okukhawulezayo okanye okungavumelekanga kwentliziyo. Banokuziva ngathi ukubhabha okanye ukubetha esifubeni. Uthi ukuba nje bahlala rhoqo kwaye bahlala ixesha elifutshane, ukubetha kwentliziyo akuyongxaki, kodwa ukuba isigulana sixhalabile okanye sikhathazekile, kufuneka basoloko bethetha nengcali yokubelekisa.
Kukho izizathu ezimbalwa zokuba abasetyhini abakhulelweyo banokufumana ukubetha kwentliziyo, kubandakanya uxinzelelo, ukusetyenziswa kwecaffeine okanye iziyobisi, iingxaki zentliziyo ezinje ngerhythmia, okanye ezinye iimeko zentliziyo. Ukuba uva iintlungu esifubeni, ukuphefumla kancinci, okanye ukubetha kweempundu zihamba rhoqo okanye zithatha ixesha elide, kuya kufuneka ufune unyango, ucebisa uGqirha Mudd.
Indlela yokumisa ukubetha kwentliziyo ngexesha lokukhulelwa
Kwiimeko ezininzi, ukubetha kwentliziyo kuya kuhamba ngokwazo ngaphandle konyango. Ngaphandle kokuba zibangelwa yimeko enzulu ngakumbi, kusenokwenzeka ukuba umboneleli wakho wezempilo akazukucebisa unyango. Kwiimeko ezithile amayeza aya kufuneka emva kwekota yokuqala. Kwiimeko ezinzima kakhulu, inkqubo ebizwa ngokuba yi-cardioversion inokuyothusa intliziyo yakho ibuyele kwisigqi. Sebenza nodokotela wakho ukufumanisa umngcipheko ophantsi kuwe kunye nosana lwakho.
I-Peripartum cardiomyopathy: Inqabile, kodwa malunga nemeko yentliziyo
Inkqubo ye- Umbutho wentliziyo yaseMelika ithi i-peripartum cardiomyopathy (PPCM) yimeko yentliziyo engaqhelekanga ekhula rhoqo kwinyanga ephelileyo yokukhulelwa, okanye ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintlanu emva kokubeleka. I-PPCM luhlobo lokungaphumeleli kwentliziyo kuboniswe ngamagumbi entliziyo andisiweyo anciphisa ukuhamba kwegazi ngentliziyo.
Ezinxulumene: Iimpawu ze-13 zeengxaki zentliziyo ekufuneka uzikhathaze ngazo
Olu hlobo lokusilela kwentliziyo kunqabile kakhulu. E-United States, malunga ne-1,000 ukuya kwi-1,300 yabasetyhini abakhulelweyo baya kuphuhlisa i-PPCM. Ngokuka-AHA, ezinye zeempawu zibandakanya ukudinwa, ukubetha kwentliziyo okanye ukuziva ngathi usitsibela ukubetha (ukubetha kwentliziyo), ukuphefumla kancinci ngomsebenzi kwaye xa ubeka phantsi, ukwanda kwesidingo sokuchama ebusuku, ukudumba kwamaqatha kunye nemithambo yentamo, kunye noxinzelelo lwegazi . Ngelixa i-PPCM ithathwa njengenqabileyo, iAmerican College of Obstetricians kunye neGynecologists ithi i-peripartum cardiomyopathy ngoyena nobangela wokufa koomama, kwaye inegalelo kuma-23% okusweleka koomama emva kwexesha lokubeleka.
Bobabini uGqirha Mudd kunye noGqirha Trolice bayavuma ukuba impilo esempilweni ngexesha lokukhulelwa kubalulekile ekukhulelweni okunempilo.
Ungayigcina njani kwi-Freestyle Libre nge-SingleCare
ingakanani i-tylenol endinokuyithatha nge-ibuprofen
uyisusa njani i-cherry angioma ekhaya
kukhuselekile ukuthatha i-melatonin
bangaphi abantu kuthi abafunyaniswa benesifo sengqondo
ungathatha i-claritin kunye ne-zyrtec ngaxeshanye
bangaphi abantu abanesifo seswekile kuthi